Manampia Pop Sales amin'ny tranokalan'ny Ecommerce | Martech Zone
Porofo ara-tsosialy manakiana rehefa manapa-kevitra ny mpividy amin'ny tranokala ecommerce anao. Ny mpitsidika dia te hahafantatra fa atokisana ny tranokalanao ary misy olon-kafa mividy avy aminao. Imbetsaka, tranokala ecommerce no mijanona tsy mihetsika ary efa tonta sy taloha ny hevitra… misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitr'ireo mpividy vaovao.
Endri-javatra iray izay azonao ampiana, ara-bakiteny ao anatin'ny minitra vitsy dia ny Sales Pop. Ity no tampony havia havia izay milaza aminao ny anarana sy ny vokatra novidian'ny olona vao tsy ela akory izay. Ny Sales Pops dia misy fiantraikany lehibe amin'ny mpividy mety liana amin'ny vokatra iray amin'ny tranokalanao fa tsy fantany raha azo atokisana na tsia ny tranokalanao. Amin'ny fahitana ny onjan'ny fividianana vao haingana avy amin'ny mpanjifa hafa dia mahatsapa izy ireo fa tranokala e-varotra azo itokisana ianao.
Mety ho fanamby kely ny fanaovana programa rafitra toa izao Beeketing dia nanangana sehatra matanjaka izay mampifangaro teratany ny Shopify, WooCommerce, BigCommerce, Magento, Weebly ary Lightspeed. Mampiasa AI, Beeketing dia afaka mikendry sy manamboatra ny endrik'izy ireo hanatsarana ny varotra ecommerce amin'ny ankapobeny.
Raha mitsidika ny tranokalako WordPress ianao dia mety tsy hitanao mihitsy hoe manana aho tolotra faritra. Tsy tsapan'ny ankamaroan'ny olona izany, ka varotra varotra isam-bolana ihany no azoko. Nametraka ny pop sales aho ary minitra vitsy taty aoriana dia nifangaro tanteraka ny sehatra. Tsy vitan'ny hoe efa nahazo ny fividianana teo aloha izy io, fa afaka nanampy vokatra izay tiako hampiroborobo bebe kokoa ihany koa.
Tao anatin'ny iray andro dia nanana varotra fanampiny aho!
The Sales Pop ny porofo ara-tsosialy fa tsy ilay fisehoana ao anatin'ny Beeketing fotsiny, azonao atao ny manampy vitsivitsy. Ny tsara indrindra dia manomboka maimaim-poana ny vidiny hahafahanao manome azy io.
Other Beeketing ny endri-javatra ecommerce dia ahitana:
Mampiroborobo ny varotra - Tolo-kevitra Upsell sy Cross-mivarotra
Torohevitra manokana - manome soso-kevitra ny vokatra ary manatsara ny sandan'ny filaminana.
Vata coupon - Ampitomboy ny fivarotana amin'ny popups coupon.
Avereno ny Pusher Cart - fampandrenesana momba ny fanafoanana ny sarety.
Sandam-bola Converter - ovao ho azy ny vidiny ho an'ny varotra iraisam-pirenena.
Mpanova finday - hampitomboana ny finday.
Help Center - varavarankely chat hanampy ny mpitsidika.
Messenger Messenger - fampidirana Facebook Messenger mandeha ho azy.
MailBot - ho an'ny valiny mailaka natokana ho azy.
Hafatra faly - mailaka fisaorana avy amin'ny tompona fivarotana.
Carta Countdown - hamoronana fahatsapana maika ny varotra.
Fisondrotana amin'ny Checkout - asaivo mizara ny zavatra novidiny tamin'ny media sosialy ny olona.
Rehefa misoratra anarana ianao dia manome rohy referral anao koa… ka ity ny ahy:
Atombohy dieny izao!
Tags: sarety nilaozanachat ecommercetolo-kevitra momba ny ecommercelightspeedweeblyWeebly sy hazavana
Ny Landscape Marketing Digital